Boeing's Aviall dia nanambara fifanarahana tamin'ny mpamatsy iraisam-pirenena lehibe
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing's Aviall dia nanambara fifanarahana tamin'ny mpamatsy iraisam-pirenena lehibe
Jolay 18, 2018
Boeing tamin'ny alàlan'ny zanany vavy Aviall, dia nanambara fa nanao sonia fifanarahana tamin'ny ANTONOV avy any Ukraine, ny WaterGuard Iraisam-pirenena any Canada, ary ny Cargolux any Luxembourg.
Boeing tamin'ny alàlan'ny zanany vavy Aviall, dia nanambara fa nanao sonia fifanarahana izy Okraina Antonov, Kanada International WaterGuard, ary Luxembourg ny Cargolux.
"Ny tambajotram-panomezana serivisy maneran-tany an'ny Boeing dia hanome fanampiana an-toerana amin'ny alàlan'ny Aviall, manampy amin'ny fanatanterahana ny baiko amin'ny fiaramanidina ary manome tombony ho an'ny mpiara-miombon'antoka sy mpanjifantsika," Eric Strafel, Filohan'ny Aviall ary tale jeneraly. "Ankafizinay ny fahatokisan'ny mpiara-miasa anay hanampy ny mpanjifa manerana ny indostria aerospace hanatanteraka ny fampanantenany."
Ny fifanarahana androany dia manompo ny mpanjifa ara-barotra sy iraisam-pirenena.
Okraina ANTONOV dia nanao sonia fifanarahana tamin'i Aviall, ao anatin'izany ny fikasana hanohana ny famokarana ny programa fiaramanidina vaovao indrindra, ny AN-1X8. Aviall dia hitantana ny fividianana rojom-bary famokarana ho an'ny famokarana ANTONOV, ao anatin'izany ny lozisialy logistics sy ny stocking forward, manampy amin'ny fanatanterahana ny baiko an'ity programa fiaramanidina ity ary ny fanohanana manaraka.
Ny International WaterGuard (IWG) dia nanao sonia fifanarahana fizarana manokana folo taona miaraka amin'i Aviall ho an'ny heaters rano fidiovana izay mifanaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 737, 747, 767 ary 777. Kanada-Niorina amin'ny rafitra IWG mifototra amin'ny rafi-pitobiana amin'ny indostrian'ny fiaramanidina mandritra ny 30 taona.
Cargolux dia nanao sonia fifanarahana ho an'ny fanohanana Aviall. Ny fandaminana dia mamela an'i Cargolux hanohy hiasa ny fiaramanidiny 747-400F amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo filàna fampidirana motera hatramin'ny 33 ny fitsidihana fivarotana maotera amin'ny alàlan'ny fiasa mahomby.
Momba ny Aviall
Aviall dia miasa amin'ny maha orinasa iray manontolo an'ny The Boeing Company, manohana ireo orinasam-pandraharahana ara-barotra sy fiarovana ao Boeing. Aviall dia mpamatsy vahaolana lehibe amin'ny serivisy fitantanana rojom-bary ho an'ny indostria aerospace sy fiarovana. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.aviall.com.
Airbus dia manitatra Skywise amin'ny mpamatsy
Six Sense St. Kitts Resorts dia manome pasipaoro St. Kitts & Nevis